डा.भिम रावलको नाम जोडेर भाइरल भएको "ओलिलो शरीरमा स्त्रीको …" शिर्षकको समाचार भ्रामक
१४ पुष २०७७, मंगलवार ०९:३३
पुस १४, काठमाडौ –
प्रतिनिधि सभा सदस्य डा. भिम रावलको नाम जोडेर भाइरल भएको “ओलिको शरीरमा स्त्रीको…” शिर्षको समाचार भ्रामक र झुटो भएको पुष्टि भएको छ ।
‘परदेशीन्युज’ नामको अनलाइनमा पुस १३ गते आएको उक्त समाचार गलत र भ्रामक भएको डा. रावलका स्वकीय सचीव गोभिन्द दुवालले बताएका छन् । डा. रावलले यस्तो बोलेको भए प्रमाण ल्याउन समेत स्वकीय सचीव दुवालले चुनौती दिए । उनले भने, ”यो समाचार गलत र भ्रामक छ। भिम रावलको लोकप्रियता देखेर उहाँको चरित्रहत्या गर्ने दुस्साहस गरि यस्तो झुट्टो र भ्रामक समाचार बनाईएको छ ।” दुवालले यो समाचार लेख्ने जो कोहि भएपनि कारबाहीको दायरामा ल्याईने समेत बताए । उनले केही बुद्धिजीवी व्यक्तिहरु पनि फेक न्युजको पछि लागेको देख्दा दुख लागेको बताए ।
नेता रावल आइतबार धनगढी गएका थिए । उनले त्यहाँ आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन पनि गरेका थिए। यससम्बन्धी समाचार अरु मूलधारका अनलाइनहरुमा पनि आएका छन् तर भाइरल भएको समाचार जस्तो कहिँ कतै बोलेको देखिँदैन् । भिम रावलले बोलेको भिडियोहरु समेत सार्वजनिक भएको भएपनी समाचार उल्लेख भएजस्तो बोलेको कतै सुनिँदैन् ।
सुप अनलाइन टिभी नेपाल नामको फेसबुक पेजमा ३४ मिनेटको भिडियो अपलोड गरिएको छ। भिडियोमा र्‍यालीदेखि रावलको सम्बोधनसम्म समेटिएको छ। भिडियोमा उनले भाइरल भएको समाचारमा जस्तो ‘स्त्री अङ्गको कुरा’ गरेका छैनन्। त्यसैगरी तिलक ओझा नामको युट्युब च्यानलमा पनि २६ मिनेटको भिडियो अपलोड गरिएको छ जसमा रावलले विभिन्न विषयमा बोलेका छन्। धनगढीमा भएको सभाको यो भिडियोमा उनले स्त्री अङ्गको कुरा गरेको सुनिँदैन।
११ जिल्लाको सिडियो फेरिए, को कहाँ पुगे ?
दमकमा प्रचण्ड–माधव पक्षीय विद्यार्थीहरुको प्रदेशस्तरीय भेला सम्पन्न